चार हावा को जंगल: यो कसले लेखे, यो के बारे मा छ वर्तमान साहित्य
अघिल्लो वर्ष पुस्तक बिक्रीमा गयो चार हावाको जंगल, एक अपराध र रहस्य उपन्यास छोटो समय मा दोस्रो संस्करण पायो। तपाइँ यसलाई बुकस्टोर्स मा देख्न सक्नुहुन्छ र यो तपाइँको आँखा लाई समात्यो।
Cantabria मा सेट, यो किताब एक हो कि धेरै को बारे मा कुरा गर्न को लागी दिइन्छ, तर चार पवन को वन को बारे मा के हो? कसले लेखेको हो? तपाइँ यसलाई किन पढ्नु पर्छ? हामी तपाईंलाई बताउनेछौं।
1 कसले चार हवा को वन लेखे
2 चार हावा को वन के बारे मा छ
3 मुख्य पात्रहरु
4 यो एक अद्वितीय पुस्तक वा एक गाथा हो?
5 तपाइँ किन चार हावा को वन एक मौका दिनु पर्छ
कसले चार हवा को वन लेखे
स्रोत: मारिया ओरुना
चार हावाको जंगल यदि लेखक मारिया ओरुनाको विचार नभएको भए यो किताब हुने थिएन। जे होस्, धेरै अन्य उपन्यासहरु जस्तै कि इतिहास को एक निश्चित भाग संग सम्झौता, यो दस्तावेज को धेरै बर्ष को लागी सबै चीज लाई बाँधिएको र राम्रो संग बाँधिएको को लागी आवश्यक छ। वास्तवमा, पुस्तकको अन्त्यमा लेखक आफैंले बताउनुभएको छ कि कुन भागहरु वास्तविक (कहानी वा किंवदन्ती को) र कुन भाग काल्पनिक हो, ताकि हामी उनीहरुले गरेको महान अनुसन्धान को एक विचार प्राप्त होस्।
तर मारिया Oruña को हो?
मारिया Oruña Vigo मा 1976 मा जन्म भएको थियो। उनी एक गैलिसियन लेखक हुन् र यो पुस्तक, चार हवाहरु को वन कुनै पनी उनको पहिलो किताब हो। ठूलो सफलता उनको प्यूर्टो Escondido त्रयी, तीन पुस्तकहरु कि Destino पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित गरीएको छ र अपराध उपन्यास मा पहिलो सफलता को चिन्ह लगाईएको छ, को साथमा यो चाँडै कातालान, जर्मन र स्पेनिश मा अनुवाद गरीएको थियो। ।
चार हवाहरु को जंगल लेखक को नवीनतम उपन्यास हो, जो उनले २०२० मा पूर्ण कैद मा जारी गरीन्, तर यसले उनलाई सफल हुन बाट रोक्न सकेन।
अब, उनी मात्र एक लेखक हुन्? खैर सत्य यो हो कि छैन। साँच्चै उनको प्रशिक्षण कानून मा छ, किनकि उनी एक वकील हुन्। तर यसले उनको लडाई एक लेखक र एक स्तम्भकार बन्न सकेन। १० बर्ष सम्म उनी श्रम र व्यावसायिक दुबै वकिल को रूप मा काम गरीरहेकी थिइन्, र २०१३ मा जब उनले आफ्नो पहिलो स्व-प्रकाशित उपन्यास ला मानो डेल आर्क्वेरो को सुरुवात गरे, जसले कार्यस्थल मा उत्पीडन र अधिकार को दुरुपयोग को बारे मा कुरा गरे। लेखकका अनुसार, उपन्यास मामिलाहरु मा आधारित थियो कि उनी आफैले उनको काम को माध्यम बाट थाहा थियो।
चार हावा को वन के बारे मा छ
तपाइँ चार हवाहरु को वन को बारे मा जान्नु पर्छ जो एक उपन्यास हो दुई समयरेखा मा हुन्छ। एक हात मा, अतीत, जहाँ तपाइँ डा। Vallejo र मरीना, १ th औं शताब्दीमा आफ्नो दैनिक जीवन र सबै कि निहित, एक पुरुष र एक महिला को लागी दुबै छ।
अर्कोतर्फ, तपाइँ जोन Bécquer, एक प्रकार का शोधकर्ता जो सत्य को लागी शिकार मा हुनुहुन्छ, वा छैन, एक किंवदंती को साथमा, वर्तमान छ।
कथा दुई लाइनहरु को बीच काटिन्छ, किनकि सबै पात्रहरु एक अर्का संग नजिक बाट सम्बन्धित छन्। यो भन्न सकिन्छ कि, यद्यपि नेक्सस बिन्दु एक हत्या हो जो १ th औं शताब्दी जोन Bécquer को वर्तमान संग जोडिएको छ, उपन्यास को प्रगति को रूप मा तपाइँ देख्नुहुन्छ कि पात्रहरु कसरी धेरै मुख्य रहस्य संग सम्बन्धित छन्: नौ रिंगहरु को कथा।
यस किंवदन्ती को अनुसार, त्यहाँ नौ बिशपहरु को r औंठीहरु थिए कि जादुई शक्तिहरु, उपचार गर्न सक्षम थिए। तर हामी तपाइँलाई धेरै प्रकट गर्दैनौं ताकि किताब बाट केहि पनी पेट नलगाउनुहोस्।
हामी तपाइँलाई छोड्छौं सारांश:
१ th औं शताब्दीको शुरुमा, डा। भ्यालेजो भ्यालाडोलिड बाट ग्यालिसिया सम्म उनकी छोरी मरीना संगै ओरेन्से मा एक शक्तिशाली मठ मा एक डाक्टर को रूप मा सेवा गर्न यात्रा गरे। त्यहाँ उनीहरु केहि धेरै विशेष रीतिरिवाजहरु पत्ता लगाउनेछन् र उनीहरु चर्च को पतन को अनुभव गर्नेछन्। मरीना, चिकित्सा र वनस्पति विज्ञान मा रुचि तर अध्ययन को लागी अनुमति बिना, उनीहरुको समय ज्ञान र माया मा लगाउने परम्पराहरु को बिरूद्ध लड्नेछन् र एक साहसिक मा डूब हुनेछ कि एक हजार बर्ष भन्दा बढी को लागी एक गोप्य राख्नेछ।
हाम्रो दिन मा, जोन Bécquer, एक असामान्य मानवविज्ञानी जो हराएका ऐतिहासिक टुक्राहरु लाई पत्ता लगाउने काम गर्दछ, एक पौराणिक कथा को जांच। जब उनले आफ्नो अनुसन्धान शुरू गरे, पुरानो मठ को बगैंचा मा XIX को एक बेनेडिक्टिन बानी मा लुगा लगाएको एक व्यक्तिको लाश देखिन्छ। यो तथ्य Bécquer ग्यालिसिया को जंगल मा गहिरो जान को लागी उत्तर को खोजी र समय को आश्चर्यजनक कदमहरु लाई तल झर्नेछ।
चार हावा को वन मा हामी धेरै पात्रहरु लाई भेट्न जाँदैछौं तर, त्यहाँ छन् ती मध्ये तीन, जो गायन आवाज को लागी बाहिर खडा छन्, वा किनभने लेखक उनीहरु मा केन्द्रित छ। यी हुन्:
डाक्टर भ्यालेजो। यो मरीना को (पनि मुख्य) चरित्र संग सम्बन्धित छ, किनकि यो उनको छोरी हो। उहाँको समयरेखा विगतको हो, किनकि उनी १ thऔं शताब्दीको शुरुमा आफ्नो इतिहासको बारेमा बताउनेछन् जब उनी आफ्नी छोरीको साथमा ओरेन्सेको मठमा डाक्टरको रूपमा काम गर्न ग्यालिसियामा बसे।
मरिना। उनी शायद उपन्यास को साँचो मुख्य पात्र हो। उहाँ 1830 मा Ourense को मठ मा आइपुग्नुभयो र चिकित्सा (आफ्नो बुबा द्वारा) र वनस्पति विज्ञान (भिक्षुहरु र आफ्नै बुबा द्वारा) मा रुचि हुन थाल्यो। यस प्रकार, यो त्यो समय मा एक महिला को लागी "सामान्य" हो, र यस भन्दा अगाडि बाट विचलित हुन्छ। एक महिला को रूप मा उनको अवस्था को मतलब छ कि उनी यी लगाईएको सीमाहरु को बिरुद्ध लड्नु पर्छ।
जोन बेक्वेर। यो अर्को हो कि वास्तव मा अस्तित्व मा आधारित एक चरित्र हो। पुस्तक मा उहाँ एक कला जासूस हुनुहुन्छ जो नौ रिंगहरु को कथा को पछाडि छ। केहि उहाँलाई एक इन्डियाना जोन्स को रूप मा वर्णन तर उनी उनको व्यक्तित्व को कारणले उनलाई मन पराउँदैनन्।
यो एक अद्वितीय पुस्तक वा एक गाथा हो?
धेरै पटक, एक नयाँ लेखक पढ्दा हामीलाई डर को एक बिट दिन्छ, विशेष गरी को कारण धेरै किताबहरु बाट बनेको bilogies, trilogies र sagas जारी गर्ने वर्तमान फैशन को लागी, जहाँ कथा समाप्त हुँदैन।
यदि हामी यो पनि ध्यानमा राख्छौं कि यो भन्दा पहिले, मारिया Oruña एक त्रयी जारी, यो सामान्य छ कि तपाइँ शंका छ कि किताब अद्वितीय छ वा एक गाथा को हिस्सा हो।
र यो लेखक आफैं हो जसले यो स्पष्ट पारेको छ: एक आत्म-समापन कथा। त्यो हो, यो शुरू हुन्छ र एउटै किताब मा समाप्त हुन्छ; अधिक बिना। त्यो सबै अनुसन्धान र साजिश एक एकल पुस्तक मा सजीलो संग सजीलै केहि दिन मा पढ्न सकिन्छ (जब सम्म यो हुक, तपाइँ पक्कै) बनाउँछ।
तपाइँ किन चार हावा को वन एक मौका दिनु पर्छ
तपाइँ पहिले नै थोरै चार हवाहरु को वन को बारे मा अधिक जान्नुहुन्छ, तर शायद तपाइँ यसलाई अझै सम्म एक प्रयास दिन चाहनुहुन्न, वा तपाइँलाई थाहा छैन यदि तपाइँ साँच्चै यो पढ्नु पर्छ वा छैन। त्यहाँ यो गर्न को लागी धेरै कारणहरु छन्:
यो एक अद्वितीय, आत्म-निष्कर्ष पुस्तक हो। यदि तपाइँ लेखक पहिले पढ्नुभएको छैन, एक त्रयी मा पनी धेरै धेरै हुन सक्छ। तर तपाइँ एक शुरुवात र अन्त्य संग एक किताब पढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ उसको कलम मनपराउनुहुन्छ वा छैन।
यो एक को बारे मा छ स्पेन को इतिहास को हिस्सा। धेरै पटक हामी हाम्रो भन्दा अन्य देशहरुको इतिहास को बारे मा अधिक जान्दछौं। र यो साँच्चै दु: खी छ। त्यसोभए यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी मानिसहरु १ th औं शताब्दी मा स्पेन को त्यो क्षेत्रमा बस्थे र कीमिया, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा को बारे मा जान्दछन् ... तपाइँ यसलाई एक प्रयास दिन सक्नुहुन्छ।
La उपन्यास मा महिला को एक प्रमुख भूमिका छ। र हामी उन्नीसौं शताब्दी को बारे मा कुरा गरीरहेछौं, तर हामी देख्नेछौं कि कसरी यहाँ महिला एक धेरै उल्लेखनीय तरीका मा आफैलाई प्रमाणित गर्दछ।
के तपाइँ चार हावा को वन पढ्नुभयो? उहाँको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » चार हावाको जंगल